Ny tany no toerana teo ambanin'ny Redroo, slot an-tserasera dia mifototra amin'ny. Ity lalao ity dia manana foto-kevitry biby, ary ny sasany amin'ireo slots finday tsara indrindra manodidina manana foto-kevitra toy izany koa. Izany dia manasongadina ny Adventures ny mpilalao fototra, izay ny kangaroo any an-tany foana ny Aostraliana. Vakio ny ho filàzany bebe kokoa momba io slot.
Ny fahafantarana bebe kokoa momba ity Mobile Best Slots
Ity slot manana 5 reels, 4 andalana sy ny 1024 fomba mba handresy. Ny resahana dia ahitana ny masoandro izay miloko volomparasy miala ny toerana manodidina. Ny fototra ihany koa dia ahitana ny manasa-maina Australian tontolo. Ao amin'io lalao, dia afaka mahazo ny payout rehefa mifandray mitovy sary masina, amin'ny mifanila miraingiraingy azon'ny rehetra manomboka avy any amin'ny lafiny ankavia.
Manana lanjany fanehoana an'ohatra ambony-izay ahitana ny alika mitana tsora-kazo eo amin'ny vavany, roa ny mavokely miloko cockatoos, ny surfer amin'ny surfboard sy Bikini vehivavy mitafy. Low-danja marika ahitana ny fitsipika karatra nitsinjaka sary masina ny A, J, K, Q, 9 ary 10.
Tao amin'ny The Wild Side Amin'ny The Best Mobile Slots Game
Redroo Wild ihany koa dia manana marika toy ny ankamaroan'ny finday tsara indrindra slots misy. Ny bibidia kisary dia aseho amin'ny Uluru na Ayers Rock. Ny bibidia dia afaka ho hita eo amin'ny reels 2, 3 ary koa 4. Io famantarana dia soloina hafa rehetra matoanteny, mba hanampy anao amin'ny fipetrahana Fandresena.
Ny hany marika fa ny Ayers Rock an'ala tsy afaka manolo ny reels dia ny Aostraliana Map aelezo matoanteny. Io marika dia hanampy amin'ny activating ny fototra lalao tombony endri-javatra. Ity endri-javatra tombony dia Free Spins manodidina araka ny hazavaina eto ambany.
Miaraka amin'ny tsy manam-paharoa ny foto-kevitra mifototra amin'ny karazana tsy fahita firy ny soavaly, fandoavam-bola izany finday slots finday Azo antoka ny nanaovany anareo glued ao amin'ny solosaina, na finday tsy fotoana. Izany no ho an'ny antony tsara; fa nahazo valisoa mahafinaritra ny sasany.
Azonao atao ihany koa ny mahazo multipliers mampientam-po ao amin'ny malalaka spins manodidina. Miaraka amin'ny bibidia olomangan'ny teo na dia iray akory reels 2, 3 ary 4 mitarika ho amin'ny fandresena, dia mahazo ny 2x na 3x hetsiky. Ka vao roa, fara fahakeliny ny fivoaky ny fanehoana an'ohatra izay mitarika ho amin'ny fandresena, dia afaka mahazo toy ny avo tahaka ny 27x ny payout. Rehefa tanety hanely roa sary masina eo amin'ny kofehy ireny maimaim-poana manodidina, dia hahazo dimy fanampiny maimaim-poana toy ny valim-pitia spins
Izany no iray amin'ireo tsara indrindra finday slots amin'ny lehibe gameplay, milamina sary sy ny sarimiaina. Feonkira dia tena mahafinaritra sy mety ho an'ity lalao lohahevitra. Misy ny RTP ho avo toy ny 95.30%, izay midika fa amin'ny wager ny £ 100 dia hahazo ny payout ny £ 95,30.